त्रिभुवन विश्वविद्यालयको फेसबुक पेजको स्टोरीमा अश्लील तस्बिर राखिएपछी...! - Dhangadhi Khabar
सोमबार ३०, चैत २०७७ २१:१२
विश्वविद्यालयको लोगो दुरुपयोग
धनगढी । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको फेसबुक पेजको स्टोरीमा अश्लील तस्बिर राखीएको पाईएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको फेसबुक पेज https://www.facebook.com/TribhuvanUniversity मा उक्त तस्बिर राखीएको पाईएको हो ।
उक्त फेसबुक पेजमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लो गो प्रयोग गरीएको छ । कभर फोटोमा विश्वविद्यालयको तस्बिर राखीएको छ । जहाँ ५४ हजार बढी फेसबुक प्रयोग कर्ताहरु जोडीएका छन् ।
यहाँ सम्मकी उक्त फेसकुक पेजमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वईवसाईट समेत लिङ्क गरीएको छ । फेसबुकमा (त्रिभुवन युनिर्भसीटी) को नाम बाट कयौं फेसबुक पेजहरु खोलीका छन् । ति मध्ये कुन आधिकारीक हो भन्ने पनि अन्यवल छ । उक्त पेजमा राखीएको अश्लील तस्विरको साथमा कुनै पाकिस्तानी वईवसाईट लिङ्क गरीएको छ ।
यस्ता खालका गतीविधीहरुले समाजमा कत्तिको असर पार्छ त्यो पनि शैक्षिक संस्थाको ? कुनैपनि संस्था तथा कम्पनीको लोगो को दुरुपयोग गर्नु, गराउनु गैरकानुनी मानिन्छ ।
सरकारी शैक्षिक संस्थाको नाम र लोगो दुरुपयोग कसले गरेको को हो, यो फेसबुकपेज पनि वास्तविक हो या होइन ? सो कार्य गर्नुको रहस्य के हो ? त्यो भने अनुसन्धानको विषय हो । उक्त गैर कानुनि विषमा संबन्धीत निकायको यथासीघ्र ध्यान जना जरुरी छ ।
स्टोरीमा राखिएको अश्लील तस्बिर:
सोमबार १७, फागुन २०७७ ११:५५ मा प्रकाशित
#त्रिभुवन विश्वविद्यालय #अश्लील